Nebulizer nkpuchi, Oxygen nkpuchi, Ọ dịghị òkè oxygen cannula - Bornsun
Usoro mmuta na-enye nchekwa mmiri dị mma ma nwee ntụkwasị obi na arụmọrụ niile yana ebe nlekọta ahụike. akpa mmiri dị na nha 1000ml na 2000ml. Emere ha na ihe nkiri polyethylene siri ike ma sie ike, na-eme ka sistemụ ahụ dị mma, na-adị ọcha ma na-adịgide adịgide.
Mkpuchi Oxygen na-adịghị akwụghachi
Ọ dịghị mma Oxygen Cannula-soft Tip
Anụ Oxygen Cannula
Ijikọ tube na Yankauer Aka
Chedị nkpuchi Tracheotomy
Trachea Cannula .dị
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. tinyere aka na nyocha ngwaọrụ ahụike, rụpụta na ịre ahịa. Ndị otu R & D nke MD na ndị isi injinia na-agbaso na ahịa, sayensị na teknụzụ dị ka ihe nduzi, na-azụlite ngwaahịa ndị dị elu na teknụzụ mgbe niile. izute ihe ndị a chọrọ pụrụ iche nke iku ume, anesthesiology na ndị dọkịta na-ahụ maka mberede.
"Izu Udo Na-ahụ Maka Nchedo Ahụike Mba Ahụ" Nzụrọ sayensị na nke ezi uche dị na ya nke ngwaọrụ ahụike ezinụlọ
Ngwa ahụike na-ezo aka na akụrụngwa, akụrụngwa, ngwa, in vitro diagnostic reagents na calibrators, ihe, na ihe ndị ọzọ yiri ya ma ọ bụ nke metụtara ya ejiri ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi na ahụ mmadụ, gụnyere ngwanrọ kọmputa achọrọ. A na-enweta ịba uru ahụ site na usoro anụ ahụ ...
Site na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ngwa ahụike, ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ kwesịrị ịhazi site n'echiche nke mmadụ iche iche, ọgụgụ isi, na agagharị. N'otu aka, echiche ndị a nwere ike ịkwalite mkpa mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'aka nke ọzọ, isi ihe atọ a ga - egosi ...
China soplaya elu mma plastic eji